Raràn’ny filohan’i Gambia ny ‘fanombinana ny taovam-pananahan’ny vehivavy, saingy mbola be ny asa miandry · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Elisabeth Guerrier
Voadika ny 07 Desambra 2019 5:44 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Català, Français, русский, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny 2015)
Ny filohan'i Gambia nandray fitenenana teo anoloan'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana tamin'ny 24 Septambra 2013. Sary an'ny ONU, nopihan'i Erin Siegal. Lisansa Creative Commons BY-NC-ND 2.0.
Na Gambia izy tenany aza dia zendana toy ny nahazendana rahateo izao tontolo izao tamin'ny 23 Novambra 2015 rehefa nanambara ny didim-panjakana iray izy mandràra ny fanaovana ny fanombinana ny taovam-panahan'ny vehivavy (FGM), andro vitsy monja nialoha ny Andro Erantany ho fanafoanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy.
Ny fanombinana ny taovam-pananahan'ny vehivavy, na FGM (fanesorana clitoris, fanjairana) dia ahitàna fombafomba fanesorana ampahany na ireo taova ivelany rehetra noho ny antony tsy ara-pahasalamàna akory. Matetika dia hareza fiharàtana no ampiasaina hanaovana ny fanesorana, nasiana fanafody fanadontoana na tsia. Tsy misy vokany tsara akory amin'ny resaka fahasalamana ity fomba fanao ity no sady mety hiteraka fahasarotana maro hampangirifiry. 19 ireo firenena ao Afrika nanambara azy io ho tsy araka ny lalàna.
Nosafidian'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana ny andron'ny 25 Novambra isantaona mba hanokafana andro 16 hanaovana hetsika manodidina ny herisetra atosiky ny maha-lahy na maha-vavy.
Ny filohan'i Gambia, Yahya Jammeh, raha niteny nandritra ny fihaonana politika tao amin'ny toerana nahaterahany ao Kanilai,dia nanolotra didim-panjakana iray mihatra avy hatrany mandràra io fomba fanao io. Hoy izy :
Ny fanombinana taovam-pananahan'ireo vehivavy (FGM) dia raràna eto Gambia, manomboka eto Kartong (vohitra an-tsiraka ao atsimo-andrefan'i Gambia ao amin'ny sisintany iraisana amin'i Senegaly) ka hatrany Koina (vohitra manamorona ny ilany atsimo amin'ny renirano Gambia) Nandritra ny roapolo taona, nikaroka tao anaty Korany aho ary nitafa tamin'ireo mpitondra fivavahana mba hanamarinana raha toa ka voalaza ao anaty Korany io fomba fanao io, fa tsy nahita tao aho.
Somary tamin'ny fomba mifalihavanja ihany no nampiakoan'ireo fampahalalambaovao erantany izany, nanomezany voninahitra ireo taompolo maro nikatrohan'ireo mpikatroka ho an'ny vehivavy sy mpiaro ny zon'olombelona. Na misy aza ny fandraràn'ny filohampirenena, tsy misy lalàna na iray aza ao amin'ny firenena ka hoe mandràra io fomba fanao io ary ireo mpanaramaso sasantsasany dia nanasa ny rehetra hitandrina tsara alohan'ny hilazana fa efa nandresy sahady.
“Fanamarinana sady ara-kolontsaina no ara-pinoana sy ara-drazana”
Araka ny tatitra iray avy amin'ny UNICEF, mizarazara ny hevitr'ireo mpitarika fivavahana miozolmàna momba io resaka fanombinana taovam-pananahan'ny vehivavy io, ao amin'ny firenena iray izay silamo ny 90% amin'ny mponina. Milaza ny sasany fa safidy no anaovana io fomba io, nefa fombam-pinoana (sunnah) amporisihana ny fanombinana izay efa talohan'ny finoana silamo, ary misy mampihatra azy io ireo olona avy amin'ny antokom-pinoana hafa manerana an'i Afrika, manondro ny fisian'ny singa iray amin'ny maha-fomba ara-kolontsaina mafy fototra ao anatin'ilay fanao.
Diabe nataon'ireo vehivavy mpikatroka manohitra ny fanombinana taovam-pananahan'ny vehivavy, tao Gambia. Sary nampiasàna ny lisansa Creative Commons de GAMCOTRAP
Miely patrana ao Gambia ny fanombinana taovam-pananahan'ny vehivavy, ary misy ireo tarehimarika mamoaka fa 70% amin'ny vehivavy no iharan'izany amin'ny endrika samihafa. Efa ho taompolo roa mihoatra izao, zara raha nisy fiantraikany ireo ezaka fikatrohana sy fisoloana vava natao, indrindra fa eo amin'ny sehtra politika. Hatreto aloha, fanoherana mivaivay avy amin'ireo mpanao politika izay mandà na dia ny hihaona fotsiny amin'ireo vondrona avy amin'ny fiarahamonina sivily mba hiresaka io raharaha io aza no nosedrain'ireo ezaka mba fampidirana lalàna handraràna ny fanombinana taovam-pananahan'ny vehivavy ao amin'io firenena bitika kely ao Afrika Andrefana io.
Ity ambany ity, fanadihadiana iray, “Manapaka ny maha-vehivavy“, momba ny famiraviràna ny taovam-pananahan'ny vehivavy ao Gambia:
Naneho hevitra tamin'ilay vaovao i Modou Joof, Gambiàna iray mpanao gazety no sady bilaogera nandrakotra io resaka FGM io, ary olana hafa marobe mifandray amin'ny zon'olombelona :
Ity no mety ho fiandohan'ny fihetsehan'ny fahavonana apolitika iray handraràna ny FGM – izay tsy ampy nandritra ireo fampielezankevitra.
Ny Girls Agenda, iray amin'ireo fikambanana miorina eny anivon'ny vondrompiarahamonina ary miezaka mandresy lahatra hanomezana zo ireo vehivavy sy ankizivavy, dia nandefa ity tao amin'ny pejiny Facebook :
Hitohy hatrany ny fomba ataonay eny an-kianja mba hanairana ny saina sy hitakiana fanaovana politika, lalàna, ary fomba fanao entina manamafy sy manaiky ireo zon'ny vehivavy sy ankizivavy. Manolo-tena izahay hamongotra izay rehetra endriky ny herisetra, mianga amin'ny FMG, ny fampanambadiana ankizy, ny herisetra ataon'ny olona miaraka amin'ny tena, ka hatrany amin'ny fanilikilihana ara-politika, amin'ny alàlan'ny fanomezana ny ankizivavy ireo fitaovana tsara indrindra momba ny fifandraisana, ny fifampiresahana ary ny fahaizamanao amin'ny fametrahana ny maha-izy ny tenany, zavatra ilain'izy ireo mba hamirapiràtany.
Tanaty lahatsoratra iray lavabe saingy feno fandalinana momba ilay fanambaràna, izao no lazain'ny bilaogy Linguere :
Ny fiakaran'ny fahatongavantsain'ny daholobe momba ny loza ateraky ny FGM sy ny fiantraikany amin'ireo ankizivavy sy vehivavy no làlana azo antoka hanovàna ny fomba fisaina sy hitondra mankamin'ny fanajanonana io fomba fanao io. Mamàka lalina ao anatin'ny kolontsaina ny FGM, ary ny fanaovana azy dia amporisihana amin'ny alàlan'ireo fanamarinana ara-kolontsaina, ara-pinoana sy ara-pombandrazana. Toy ny amin'ireo fomba hafa fanao ara-kolontsaina sy nentindrazana, tena ilaina ny hisian'ny fiovàna mba ho lasa tena zavatra iainana ny fampitsaharana azy ireny.
“Fironana ananan'i Jammeh ny fanaovana fanambaràna hafahafa sy maningana”
Kanefa, ny Ivontoerana Robert F Kennedy ho an'ny zon'olombelona mampitandrina mba tsy hientanentana mialohan'ny fotoana, amin'ny filazàna fa diso fantatra loatra amin'ny fanaovana fanambaràna hafahafa ny filoha Jammeh :
Nifantoka tany Gambia ny sain'ny rehetra taorian'ny nanambaran'ny filohany efa hatry ny ela, Yahya Jamme, ny fandraràna ny FGM. Be no tsy nanampo ity fanambaràna ity, indrindra fa taorian'ny nandàvan‘ny Antenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna iray tsy nisy valaka tamin'io tamin'ny Martsa, tamin'ny filazàna hoe “tsy mbola vonona ho amin'izany ny Gambiàna” … Adino tao anatin'ireny fiarahabàna ireny, indrindra fa tety anaty tambajotra sôsialy, ny zavamisy hoe tsy voaràra ao Gambia ny FGM, na farafaharatsiny, tsy mbola izay aloha no tena izy. Tsy misy lalàna manery sy voarakitra an-tsoratra. Ary aoka ho tsaroana fa fahazaran'i Jammeh ny manao fanambaràna hafahafa tsy misy dikany, aminà fotoana iray sy maningana. Ny farany mba nahatanterahany ny fampanantenana nataony dia fony izy niozona ampahibemaso fa handripaka ireo mpifonja miandry ny fanatanterahana ny fanamelohana azy ireo ho faty, zavatra nataony tamin'ny Aogositra 2012.
Efa sady fanjakàna no antoko tokana i Gambia izao, sady mpanao sonia ireo fitaovana fifanarahana ao amin'ny faritra sy iraisampirenena amin'ny resaka fanajàna zon'olombelona, izay tsy mifanaraka amin'ny fanaovana ireo fombandrazana mahery setra, toy ny FGM. Nanao sonia ny Fifanarahana Erantany momba ny Zon'olombelona ilay firenena, ny Fifanarahana momba ny fanafoanana ny endrika fanavakavahana rehetra atao amin'ny vehivavy, ny fifanarahana momba ny zon'ny ankizy, ny Sata afrikàna momba ny zon'olombelona sy ny zon'ny vahoaka, ny Fifanarahan'i Maputo, ankoatra ny maro hafa.. Tena ilaina ampifandrindràna amin'ny fenitra iraisampirenena ireo fepetra ao amin'ny faritra..
Mety ho efa fanombohana ilay fanambaràn'ny mpanatanteraka tamin'ny 23 Novambra, fa tsy fiafaràna akory. Saingy amin'izao fotoana izao, raha mbola afaka ny misento kely mifoka rivotra ireo mpikatroka ho an'ny vehivavy, ny tena mpandresy dia ireo ankizivavy gambiàna an-jatony, raha tsy an'aliny aza angamba, izay isantaona no mety hiharan'ny fanombinana taovam-pananahana.